ရနံ့ပျံ့, လှငျပျံ့, ပင်မစာမျက်နှာရနံ့ပျံ့ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပေးသွင်း
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:ရနံ့ပျံ့,လှငျပျံ့,မူလစာမျက်နှာရနံ့ပျံ့,ရနံ့ရေနံပျံ့,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ရနံ့ပျံ့
ရနံ့ပျံ့ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ရနံ့ပျံ့, လှငျပျံ့ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, မူလစာမျက်နှာရနံ့ပျံ့ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများအတွက် Usb diffuser သစ်သားရနံ့ပျံ့နှံ့
Aluminum Alloy အကောင်းဆုံးရနံ့ပျံ့နှံ့သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများ 2019
Uk 10ml ပုလင်း USB အကောင်းဆုံးဟိုတယ်အနံ့ဆိုး
ယူကေသြစတြေးလျအတွက် USB လျှပ်စစ်ရနံ့ပျံ့နှံ့ခြင်း
Office Home ဟိုတယ်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီမွှေးပျံ့နှံ့မှု
အမေဇုံ Ebay Walmart တွင် USB Scent Diffuser အရောင်း
Elegant USB Waterless Senser Diffuser Battery ကိုအသုံးပြုထားသည်
Powered usb ဘက်ထရီမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ operated
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများအတွက် Usb diffuser သစ်သားရနံ့ပျံ့နှံ့ 100% သန့်စင်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Nebulizer diffuser ဆိုင်းငံ့မိုcloud်းတိမ်မြူ, 100% atomization, အပူ, ရေမရှိ aromatherapy ။ ဖြုန်းတီးသောဆီများမရှိပါ။ ခိုင်ခံ့သောလူမီနီယံအလွိုင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ပြုတ်ကျခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD6- 7.39 / Piece/Pieces
Yoga အိမ်သုံးရုံးသုံးရေချိုးခန်းသုံးရေမွှေးများကိုအသုံးပြုပါသည် စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာလက်ဆောင်အကြံဥာဏ် - ရိုးရှင်းသော၊ ရှုပ်ထွေး။ ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးဖြင့်အသုံးပြုထားသောကြောင့်သင့်ဘ ၀ ရှိချစ်ရသူများကိုနှစ်သက်စေသည်။ ရေမွှေးပျံ့နှံ့ခြင်း - မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ ၁၀ml ပုလင်းနှင့်အတူဒီမင်ပျံ့နှံ့မှုသည် ၈...
အလုပ်ခွင်၌စားပွဲမှလျှပ်စစ်ရနံ့ပျံ့နှံ့ခြင်း Car Diffuser သည်ရေမရှိသောကြောင့်ရေမလိုအပ်ပါ။ ဤသည်ကုထုံးအကျိုးကျေးဇူးများရနံ့သို့မဟုတ်အားနည်းခြင်းမရှိ dilution ဆိုလိုသည်။ အပြည့်အဝ aromatherapy အတွေ့အကြုံအတွက်စင်ကြယ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီဖြန့်။ USB Diffuser သည် Wireless / Portable ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် built-in၊...
Aluminum Alloy အကောင်းဆုံးရနံ့ပျံ့နှံ့သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများ 2019 ပြီးပြည့်စုံသော arma နှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအတွက် - ကုထုံးသက်သာခွင့်များ၊ စိတ်ဖိစီးမှုဖြေလျော့ပေးခြင်းနှင့်သက်သာ။ Aroma Diffuser / Air Purifier အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီးလေထဲသို့အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီးမလိုလားအပ်သောအနံ့များကိုမြှုပ်နှံနိုင်သည်။...
Uk 10ml ပုလင်း USB အကောင်းဆုံးဟိုတယ်အနံ့ဆိုး အဝတ်မပါသောအိမ်တွင်းကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောနေရာ - အိပ်ခန်း၊ ကလေးများအခန်း၊ မီးဖိုချောင်၊ ရုံးခန်းနှင့်အခန်းများစွာအတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုရန်အတွက်ရနံ့ကုထုံးနှင့်ရေသန့်မရှိသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံဖြန့်စက်။ ခရီးသွားဖော်ရွေဒီဇိုင်း။ အိမ်နှင့်ရုံးနှစ်ခုလုံးအတွက် Great Gift Idea၊...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 16.93 - 19.23 / Piece/Pieces
ယူကေသြစတြေးလျအတွက် USB လျှပ်စစ်ရနံ့ပျံ့နှံ့ခြင်း ထူးခြားသောကုထုံးကုထုံး - ရေမွှေးရရန်ရေမရှိ၊ ကုထုံး၊ BPA အခမဲ့ပစ္စည်း၊ သန့်စင်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံကိုပြောင်းလဲရန်အပူမရှိ၊ သန့်စင်သောရနံ့ကုထုံး၏ကျန်းမာရေးနှင့်အကျိုးအရှိဆုံးသောနှစ်များကိုခံစားနိုင်သည်။ ကြိုးမဲ့နှင့်အဆင်ပြေသော MINI DIFFUSER: Lithium ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည်။...
timer နှင့်အတူစီးပွားဖြစ်လျှပ်စစ်ရနံ့ပျံ့စက် ၁၀၀% အရေးကြီးသောရေနံဖြန့်ဖြူးခြင်း - ရေနှင့်အပူမရှိသောလေစုပ်စက်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီကိုတိုက်ရိုက်ဖျက်စီးပေးပြီးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအများဆုံးရရှိသည်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်း။ သယ်ဆောင်နိုင်သော USB DIFFUSER -...
ကားအကြီးစားအခန်းလုပ်ငန်းအတွက်ဘက်ထရီရနံ့ပျံ့နှံ့မှု ရေမရှိသောကားပျံ့နှံ့ခြင်း - မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုပျံ့နှံ့စေရန်လေစုပ်စက်ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ၏သဘာဝဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းသိမ်းခြင်း။ mode:2နာရီအကြာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပျံ့နှံ့, အလိုအလျောက်ပိတ်။ အိတ်ဆောင် MINI DIFFUSER -...
Office Home ဟိုတယ်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီမွှေးပျံ့နှံ့မှု [ရေမရှိ & ကြိုးမဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့]: ဤသည်ကားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့အတွက်ရိုးရာရေ -added ရနံ့ကုထုံး mode ကိုချိုးဖျက်, ဒါဟာပုံမှန်အပူချိန်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကို atomize...
အမေဇုံ Ebay Walmart တွင် USB Scent Diffuser အရောင်း ရိုးရိုးဒီဇိုင်း - ဤအနံ့ရေနံပျံ့သည်ခေတ်မီ။ ရိုးရှင်း။ လှပသောပုံစံ၊ အိမ်၊ ရုံး၊ ကား၊ မီးဖိုချောင်၊ ရေချိုးခန်း၊ စားပွဲခုံ၊ ကော်ဖီစားပွဲ၊ ယောဂ၊ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်း - ဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပျံ့နှံ့ခြင်းသည်လွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလျင်များစွာရွေးချယ်နိုင်သည်။...
ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ကင်းသောမြူမွှေးအမွှေးနံ့သာပျံ့နှံ့မှု အိတ်ဆောင်ဒီဇိုင်း: ဖန် (ပလပ်စတစ်မဟုတ်) ရေနံအိုးကော်လာနှင့်မြူ nozzle ကို (မည်သည့်ရေနံရှုပ်ထွေးမှုအခွင့်အလမ်းများ) အကြားပြီးပြည့်စုံသောတံဆိပ်ခတ်။ ဒီ ultrasonic ရနံ့ကုထုံးစင်ကြယ်သောရေနံပျံ့ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှု switch ကိုသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသည်။ အိမ်၊ ရုံး၊ ကား၊...
ဖိလစ်ပိုင်မလေးရှားပါကစ္စတန်အတွက်အိတ်ဆောင်ရနံ့ပျံ့နှံ့ PURE & NATURE USB DIFFUSER: ရေမရှိ၊ အပူမရှိ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီတစ်စက်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအများဆုံးရရှိစေပြီး ၁၀၀% သန့်စင်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေမွှေးကုထုံးကိုပေးသည်။ သေးငယ်သောအခိုးအငွေ့၊ မိနစ် ၃၀ သည်နာရီပေါင်းများစွာမွှေးနိုင်သည်။...
လန်ဒန်အိုင်ယာလန်ဟောင်ကောင်များအတွက်အနံ့ Mini ဘက်ထရီလည်ပတ်မှု - အသေးစားကျစ်လစ်သောအရွယ်အစားဖြင့်ဆီဖြန့်ကားသည်ကားခွက်ကိုင်ဆောင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကားပျံ့နှံ့ခြင်းသည်ကြိုးမဲ့ဖြစ်ပြီးသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။...
ဟိုတယ်ရုံးခန်းအတွက်ရေမွှေးပျံ့နှံ့မှုမရှိ WIRELESS RECHARGABLE DISINN: Dituo မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံဖြန့်ဖြူးသည့် Lithium battery ကို USB အားပြန်သွင်းနိုင်ပြီးနာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ Usb diffuser ကိုသင်၏အိမ်၊ သင်၏ကား၊ အိမ်သာ၊ နေရာတိုင်းတွင်သုံးနိုင်သည်။ လုံခြုံစိတ်ချရသောတာရှည်ခံပစ္စည်းများ -...
Elegant USB Waterless Senser Diffuser Battery ကိုအသုံးပြုထားသည် [USB Charger] မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကားပျံ့များသည် USB Charger (မွေးစားခြင်းမပါ ၀ င်ပါ)၊ သင်ပါ ၀ င်သောဘဏ်၊ လက်တော့၊ သင်၏ကားအတွင်းရှိ USB adapter စသည်တို့နှင့်အတူစင်ကြယ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပျံ့ကိုအားသွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အပြည့်အ ၀...
လူမီနီယမ်အလွိုင်းအကောင်းဆုံးကားရေနံပျံ့ USB Wireless & အားပြန်သွင်းနိုင်: built-in လီသီယမ်ဘက်ထရီအစွမ်းထက်အားပြန်သွင်းနိုင်နှင့်ခရီးဆောင်။ သယ်ဆောင်ရန်အဆင်ပြေပြေနဲ့အိမ်, ရုံး, ခရီးနှင့်အခန်းသင့်လျော်သော။ ဒီကားပျံ့စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်နေပါတယ်နှင့်2နာရီကြာအပြီးအလိုအလြောကျပိတ်ပစ်။ ရေ & မနွေး NO:...
usb ကားမရှိမဖြစ်ရေနံရနံ့ပျံ့ 100% သန့်စင်သောမရှိမဖြစ်ရေနံ Nebulizing ပျံ့ဆိုင်းငံ့မိုဃ်းတိမ်သည်အခိုးအငွေ့, 100% Atom, heatless, လှငျရနံ့ကုထုံဖန်တီးပေးပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံဖြုန်း။ ကြံ့ခိုင်သစ်သားဖွဲ့စည်းပုံ, သစ်သားပျံ့ကျဆင်း, စူပါတိတ်ဆိတ်, စူပါတိတ်ဆိတ်စစ်ဆင်ရေးအစည်းအဝေးများများအတွက်သင့်လျော်သော,...
လှငျ USB Ultrasonic အနံ့ပျံ့မရှိမဖြစ်ရေနံ USB မှတ် interface နဲ့ 18650 ဘက်ထရီ-operated မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့; ကြော့အစိုင်အခဲဦးထုပ်, တိတ်ဆိတ်စစ်ဆင်ရေးနှင့်အသေးစားသတိပညာခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူ Mini ကိုပျံ့; ရေနှင့်အပူမပါဘဲ usb ပျံ့, မပိုရှုပ်ထွေး On-The-သွားလာရင်းရနံ့ကုထုံရှိခြင်းသောအခါ,...
Powered usb ဘက်ထရီမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ operated မွှေးအကြိုင်ပျံ့, အာရုံစူးစိုက်သင့်ရဲ့ခံစားချက်ဝေဒနာတွေ & စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာ, ငြိမ်သက် & နှစျသိမျ့လေထုဖန်တီးခေါင်းကိုက်ပပျောက် & နာတာရှည်နာကျင်မှု & ပိုပြီးလျှော့ချဖို့အိပ်စက်ခြင်း & နိုင်စွမ်း၏ Qu ality တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, သင့် ener gy အဆင့်ဆင့်...
တရုတ်နိုင်ငံ ရနံ့ပျံ့ ပေးသွင်း
ကိုယ့်အခန်းတခန်းမှအနံ့ add don`t မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီ, သူတို့ကလည်းအိမ်ထောင်စုများအတွက်မြောက်မြားစွာကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေး။ တစ်ရနံ့ပျံ့အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ကောင်း, သင်၏ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်သင့်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကောင်းသောအိပ်စက်ခြင်းမြှင့်တင်ရန်, အခြားသူများအကြားသကဲ့သို့လေထုထဲသို့ထိုအကြိုးခံစားခှငျ့ dispense ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကအိမ်မှာရနံ့ပျံ့သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေးအတွက်ပိုမိုတက်ကြွစွာအခန်းကဏ္ဍယူချင်အထူးသဖြင့်ရှိလျှင်, လေအမြင်ကြည်လင်စေရန်တစ်ဦးကသဘာဝနဲ့ပိုလုံခြုံအခြားရွေးချယ်စရာပေးထားပါတယ်။ ရနံ့ရေနံပျံ့ခြုံငုံကျန်းမာမြှင့်တင်နေစဉ်အတွင်းသင့်အိမ်တက် freshens ကြောင်းဆီကနေသဘာဝအမွှေးအကြိုင်နှင့်အတူတစ်ဦးကအခန်းကိုဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
ပျံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံတစ်မှေးကွိုနှင့်မပြတ်မတောက်အိပ်ပျော်ခြင်းဖန်တီးကြောင်းဂုဏ်သတ္တိများလျှော့ပေါ့ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါခိုးအငွေ့ညဉ့်မှတဆင့်အိပ်ပျော်ခြင်း induces တစ်ခုရှည်တည်မြဲအကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်သည်။
တစ်အနံ့ပျံ့စိတ်ဓါတ်များ elevates သကဲ့သို့, များစွာသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုလျှော့ချရန်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးမြှင့်တင်ဖို့ကသုံးပါ။ ဒါဟာ you`re ခံစားမှုထွက်ကိုမီးရှို့သို့မဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါမှာအဘို့သည်ကြီးကြောင်းကိုသင်၏အိမ်တွင်တစ်ငြိမ်သက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒါဟာအစတစ်ဦးအပြုသဘောလေထုသတ်မှတ်နှငျ့သငျအမြားဆုံးသူတို့အားလိုအပ်သည့်အခါတိုင်းမြင့်သောဝိညာဉျအားစိတ်အား။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့လည်းပိုးမွှားရန်သင့်အားလျော့နည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်အောင်, စိုထိုင်းသောကျန်းမာသင့်ရဲ့အဲယားဝေးစောင့်ရှောက်ခြင်း, humidifiers အဖြစ်နှစ်ဆ။